Ogaden News Agency (ONA) – Hawl-wadeenka jaaliyadda Perth/Australia iyo HAD oo kulan hawleed isugu yimid
Hawl-wadeenka jaaliyadda Perth/Australia iyo HAD oo kulan hawleed isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ March 22, 2012
Waxaa kulan aad u heer sareeya isugu yimid taariikhdu shalay oy taariikhdu ahayd 21/03/12 hawlwadeenada jaaliyada S.Ogadenia ee galbeekaAustraliamagaladaPerth, kulankaasoo marti sharaf uu ugu ahaa hawlwadeenka jaaliyada Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO Dr Cabdiraxman M. Sh Mahdi (Madey). Kulankan oo dulucdiisu ahayd in warbixin lagu kala qaato, laguna falanqeeyo habsami socodka hawlaha halgan ka socda GalbeedkaAustraliaay hormuudka kayihiin hawlwadeenada jaaliyaddaPerth.
Waxaa ogu horayntiiba ayaadaha quraanka kariimka ah kufuray fadiilatu Sheekh Cabdiqadir Cali Guray. Aayadaha quraanka kariimka kadib ayuu sheekhu u soo jeediyay xubnihii goobta fadhiyay wacdi diini ah oo taabanayay arimo u badnaa akhlaaqda wanaagsan iyo u hogaansanaanta qofka muslimka looga bahaanyahay inuu u hogaansanaadaan Alle (S.W), Nabiga Muxamed ah (SCW) iyo qofka masuuliyadda loo doorto. Waxa uu ka hadlay oo kale in looga bahanyahay qofka muslimka ah in uu la yimaado daacadnimo, Alle kacabsami, hogaansanaan Alle iyo kala danbaynta oo uu soo qaatay xadiiska nabiga ee uu micnuhiisu ahaa “qofkaan u naxariisan keena yar, karaamaynina keena wayn naga mid ma aha” AKQ (SCW).
Intaa kadib, waxaa hadalkii lawaragay hogaamiyaha jaaliyadaPerthee S.Ogadenia mudane Axmed Dalmar oo kubilaabay hadalkiisii warbixin dheer oo meelo badan tabanaysa. Gudoomiyaha jaaliyada waxa uu ka warbixiyay marxaladda ay jaaliyadu soo martay, waxqabadkeeda guud iyo williba sida ay u samaysay isbadal lagu farxo mudooyinkii oogu danbeeyay. Waxaa kale uu xusay gudoomiyuhu in ay fashiliyeen hawlo cadowgu iyo cadaw ukalkaalku ay isku dayeen inay kafuliyaan magaalada hada kahor balse jaaliyada ayaa cagta wadada u saartay. Sidoo kale waxuu warbixin kooban uu kabixiyay hawlwadeenada jaliyada asaga oo ku amaanay hawlkarkooda iyo sida wanaagsan ay xilkooda oogu jajabanyihiin. Waxaa isla mawduuca warbixinta guud asna hadal kooban kasoo jeediyay Wakiilka JWXO u fadhiya Pacificga mudane Maxamed Ibrahim oo asagu u soo jeediyay amaan jaaliyada sida wanaagsan ee ay heganka oogu yihiin garab istaaga halganka iyo fashilinta qorshayaasha cadowgu soo maleego.
Qaybtii labaad ee shirka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Dr Madey oo baryahan danbeba kormeer hawleed ku joogayAustralia, shirar fara badanna horay u la soo qaatay qaybaha kala duwan ee ay bulshadu ka koobantahay. Oogu horeenba waxa uu mahad celin balaadhan usoo jeediyay hawlwadeenada qaaliga ah ee jaaliyada. Kadib intaas waxa uu kala hadalay hawlwadeenada arimo dhawr ah oo ay oogu horayso “Ururnimada”. Waxa uu sheegay mudanuhu hadii diyaar looyahay in ogadenia la xoreeyo waa in lala yimaado urunimo dhab ah taas oo u horseedi karta in ay noqdaan hal qoys oo qudh ah kuwaas oo ladhaho JWXO family. Waxa uu si aad iyo aad ahna ooga digay hawlwadeenada jaaliyada in ay kafogaadaan “KIBIRKA” oo uu ku tilmaamay shay aad u xun oo dumiya ururnimada isla markaana ah sifo allaha wayn kaliya u gooni ah.
Intaas kadib ayuu gudagalay gudoomiyaha HAD in warbixin waafi ah uu kabixiyo xaalada Ogadenia kajirta maanta, sidoo kale waxa uu ka hadlay guulaha JWXO ay ka gaadhay dhanka arimaha dibada sida in maanta siyaasada aduunka la isku raacsanyahay Ethiopia inay danbi ka gashay Ogadenia, waxay kujirtaa listiga dawladaha torture isticmaala iyo wiliba in xaga dhaqaalaha cadaadis ku heyso shacabka Ogadenia ee baahan. Waxaa kaloo guulaha kamid ah ONLF in ay tahay quwada geeska afrika oogu xooga badan taasood arkayso falkii kadhaca geeska afrika in hadal qabsi noqotay afarta xaraf ayaa kadanbaysay.
Sidoo kale waxaa kamid ah guulaha siyaasada dibada JWXO in maanta aduunku ogyahay Somalida Ogadenia u dhalatay ay yihiin kuwa kali ah ee gadoodsan ee xaqooda raadinaya ayada oo meesha kabaxday fikrada ahSomaliadhul balaadhsi ayayEthiopiaku haysataa. Waxaa sidoo kale guul laga gaadhay oo siyaasiyiinta caalamka badidoodu aaminsanyahiin arinta Ogadenia oo waxba laga qaban in geeska afrika uusan dagaynin.
Waxaa iyana Dr Madey hawlwadeenada si faahfaahsan oogu sharaxay xiriirka cadawgu uu sida dadban oo la soo sameeyay jabhada wadaniga xoraynta Ogadenia, asaga oo u sheegay hawlwadeenada in aysan jiran wax wada hadal ah oo dhax maray ayaga iyo cadawga oo aan ka ahayn kii dhaxmaray JWXO iyo ergadii arintaa u socotay oo loo sheegay shuruudaha jabhadu ay cuskato had iyo jeer.
Oogu danbayntii, waxaa la gudagalay in aragtiyo iyo afkaaro kala duwan la isdhaafsado kadibna su’aalo la waydiiyo Dr Madey asaga oo jawaabo waafi ah kabixiyay isla markaana aad moodid in dhamaan hawlwadeenadu muujinayeen firfircooni iyo xiiso loo qabo Hogaanka Arimaha Dibada Dr Madey.
Wixii kasoo kordhee kale shirarka iyo kulamada iska dabadhacaya inta Dr Madey uu ku joogo socdaalka shaqoAustraliakala soco shabakada internetka ee ONA.